izitokhwe ezithile Oovimba-Funda ukuRhweba
tag: isitokhwe esitokisini
Izabelo zeVirgin Galactic ziqala ngokunyuka kunye nokulungiswa kokhuseleko kwimisebenzi
Ukuhlaziywa: 8 January 2021
Ixabiso lezabelo laseVirgin Galactic (SPCE) lithathe inyando emva kokusilela kwendiza yovavanyo lwenqwelomoya yesithuba sendawo ngoDisemba, kodwa iindaba ezikhuthazayo izolo zikubonile ukunyuka kwesitokhwe kwakhona.
Ukubhabha okuvavanyiweyo ngoMgqibelo umhla we-12 kuDisemba kukhokelele ekubeni ixabiso lesabelo lehle kakhulu ukusukela nge-Matshi 2020, ukwehla ukusuka kwi- $ 32 ukuya kwi-26%, ukuhla nge-17%. Oko kubuyela umva kukhenketho lwendawo kuvele emva kokuba isitokhwe sikubonile ukunyuka kunyaka ophelileyo ukuya kwi-35 yeedola, kunye nenxalenye enkulu yokunyuka okwenzekileyo ukusukela ukuphela kuka-Okthobha, njengoko inzondelelo ejikeleze amathemba ayo inyukile, ngokuthetha.
Ukusukela ngoDisemba ukungahambi kakuhle kwabalandeli be-SPCE bebelinde ngokuxhalabileyo iindaba malunga nento engahambanga kakuhle.
Izolo, iinjineli zichaze ingxelo. Ngoku bayayazi into eyenzekileyo, ekhokelele kwikhompyuter yesiphekepheke ukulahleka konxibelelwano lwayo nenjini ye-rocket- ibangela ukuba kumiswe indlela yokutshaya, njengoko yayilelwe ukuyenza.
Inyani yokuba indlela yokungaphumeleli ekhatywe kuyo yayiziindaba ezimnandi ngokwazo, kodwa ngoku iinjineli zithi ziyayazi eyona nto yenzekileyo ekhokelele ekuyekeni komlilo.
Nanku umbhalo we I-tweet evela kwiVirgin Galactic esemthethweni iakhawunti ye-twitter izolo:
Umsonto: kulandela inqwelomoya yethu yovavanyo ngoDisemba 12, 2020, silugqibile uhlolo lwasemva kwenqwelomoya kunye nengcambu yohlalutyo lwesizathu sokuba yintoni ebangele ukuba ikhompyuter ikwimeko yokulahla i-rocket motor. Izenzo zokulungisa zichaziwe kwaye umsebenzi sele uqhubeka.
Nje ukuba lo msebenzi wokulungisa uphunyeziwe kwaye ungqinisisiwe, siya kuqinisekisa ixesha lethu lokuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya elandelayo yovavanyo kwaye sabelane ngemihla ekulindeleke ukuba ivule ngayo ifestile yendiza.
Nangona kungekho zinkcukacha malunga nokuba yintoni kanye ehambe gwenxa, iVirgin Galactic ngekhe ihambe irekhodi kunye neendaba zezenzo zokulungisa ukuba bekungekho kulungiswa kwentshukumo, nangona ukungabikho komda wexesha kunokubonakala kudanisa.
Kodwa ngokugweba ngexabiso lesabelo izolo, intengiso ithatha uhlaziyo njengophawu lokuba inkampani ibuyile kumkhondo wenqwelomoya wovavanyo oluyimpumelelo olunethemba lokuba aluzukuphinda luqhubeke neengxaki.
Ukuthengisa ngamandla itikiti kuthetha ukuba kukho imali ebhankini
IGalactic yinkampani eyahlukileyo kude kube yinto engaqhelekanga kwinkampani ngaphandle kwemveliso esebenzayo ukuba sele ibonile ingeniso kwiphepha lomncono.
Inkampani sele ithengise kwangaphambili amatikiti angama-600 ngexabiso eliphakathi kwe- $ 200,000 kunye ne- $ 250,000 inye. Umphathi omkhulu uMicheal Colglazier uthe kwiziphumo ze-3Q zomnxeba ngo-Novemba kunyaka ophelileyo ukuba ulindele ukuba zonke izithuba ezisebenza kuzo zenze ingeniso ejikeleze i-1 yezigidigidi zeedola, nganye ijolise kwi-400 yeenqwelo moya ngonyaka. Kulawo qikelelo amaxabiso etikiti anokufuna ukuphakama asondele $ 400,000, ngokutsho komhlalutyi we-UBS u-Myles Walton, kodwa i-Virgin Galactic icinga ukuba ibango elomeleleyo lithetha ukuba ayisiyongxaki leyo.
Silindele ukuba ixabiso lesabelo liqhubeke nokufumana kwakhona njengoko kulindelwe ukwakha inqwelomoya yovavanyo.
Itshathi ye-SPCE yeeyure zeyure ezingama-4, nge-8 kaJanuwari ngo-2021 (ngeNtengiso yokuBukela)
Ukunqongophala kweenkcukacha zexesha sele kuqatshelwe kodwa, okubaluleke kakhulu, bekungekho kurhoxiswa okanye ukulungiswa kwenjongo yenkampani eyayibhalwe ngaphambili yokuba ngumsunguli weVirgin oyindizayo uRichard Branson emajukujukwini ekupheleni kwekota yokuqala ka-2021 kunye nokuqalisa kwakhona ukuthengisa amatikiti kungekudala emva koko.
Inqwelomoya yokubaleka ngoDisemba yayisisithathu, ezinye zenzeka ngoDisemba ka-2018 nangoFebruwari 2019. Inkampani okwangoku ineziphekepheke ezimbini kwaye isebenza kwisithathu ngendleko efikelela kwi-55 yezigidi zeedola. Kuya kudinga ispacecraft, kunye noomama benkqubo yokuqaliswa komoya nayo, ke kukho ininzi yeCapex ezayo ngaphambili. Kodwa ukuba ingafumana ukhuseleko ngokuchanekileyo, emva koko inkampani iya kukhusela isibonelelo sokuhambisa ngaphezulu kweenzame ezivela kwizinto ezithandwayo zeSpaceX kunye neBlue Origin.
Kwi-eToro app, yiya 'kwiNtengiso yoRhwebo' okanye 'kuLuhlu lokuBukela', cofa kwi-icon yokukhangela, faka itiki, khetha i-SPCE kwaye ucofe 'urhwebo'.
Ungayifumana i-odolo oyivulileyo (ukuba uphawu lwangaphambili) phantsi kwecandelo 'lePotifoliyo', apho uza kubona khona 'kulindwe iodolo' - cofa 'jonga' ukuseta iinkcukacha zomyalelo
Udade inkampani iVirgin Orbit ibonelela ngesakhono sokumiliselwa komoya kwaye iqhuba uvavanyo lwayo olulandelayo lokuqalisa irokethi yayo yokuqalisa i-rocket nge-10 kaJanuwari (kule Cawa) kwilinge layo lesibini lokufumana isithuthi sayo sokuhambisa isathelayithi kwindawo, kwaye iya kujongwa ngokusondeleyo yiVirgin Galactic abanini zabelo. Irokethi isuka kwi-Boeing 747 eguqulweyo, eya kuthi isuke emoyeni iMojave kunye ne-spaceport phakathi ko-1 kunye no-5 ngokuhlwa kweMpuma.
Ukwanda kokungalingani kobutyebi kunokuba kubi kuthi sonke, kodwa kule meko kuthetha ukuba baninzi abantu abazizityebi ngokwaneleyo ukuba banakho ukufumana i-250,000 yeedola okanye nangaphezulu ukukhwela okuninzi kwizithuthi zabakhweli abathandathu iVirgin Galactic ithatha indawo esezantsi yomhlaba.
Abo banesimo sovalo ngakumbi banokufuna ukuthengisa ngaphambi kokuba kuqhubeke inqwelomoya yovavanyo, kodwa ke umngcipheko wokuba uphume kwintengiso ukonyusa ixabiso lentengo oza kulifumana kwiindaba zokuhamba ngenqwelomoya okuphumeleleyo.
Silinganisela i-SPCE yokuthenga kunye nethagethi yexesha elikufutshane ye- $ 35.
Ungathenga i-SPCE ngaphandle kwekhomishini okanye umsebenzi wesitampu kwi-eToro.
tags richard Branson, isitokhwe esitokisini, ubuchwephesha betechnology, Intombi eyiGalactic (SPCE), izabelo ze-virgin galactic